LWETYATHANGA SENTSIMBI - welding amandla umvelisi pte ltd
isazisoIsalathiso esingachazwanga: id in /www/wwwroot/gear-reducers.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-image.php kumgca 119
isazisoIsalathiso esingachazwanga: id in /www/wwwroot/gear-reducers.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/opengraph/class-twitter.php kumgca 194
Imizi-mveliso yeConnexus ikuvumile ukuqhubeka kweVC Brand yeeTyathanga zensimbi. I-VC Brand ithi ikhosi yokwenza imveliso ekumgangatho ophezulu, kunye nobomi obude benkxaso. Olu hlobo lwenzuzo lubandakanya oku kulandelayo:
? Inani elipheleleyo leRatch Match Rivets
? Izinto eziGqwesileyo eziPhakamileyo kunye nokunyanga ubushushu
? Iyonke iCandelo leFit Fit Rivets
? Umgangatho ophezulu wezinto kunye nokunyanga ubushushu
? Ngokukodwa eyakhelwe ukumelana nesantya esikhulu, usetyenziso lweMpembelelo
? Yenzelwe ukuhlala ixesha elide kwinkonzo ye-Sugar Mill
? Ubushushu buphathwe ngeNsimbi engenasiphelo, ukhetho olunzima lweChannel olukhoyo
I-IAnco Cast alloy yentsimbi kunye neHadfield manganese yamatsheyini okusila ayenzelwe ezona nkonzo zinzima kumaziko okulungisa iinkuni namhlanje. Ziyilelwe ukuphatha ukunxiba okugqithisileyo, imithwalo eqine enkulu kunye nefuthe elibi. Amandla ethu okubumba okuncamathiseleyo kwikhonkco kususa naliphi na ithuba lokudala ubushushu ngokuchaphazela imimandla; Nangona kunjalo, izinto ezinokuthengiseka ngokulula zinokuvunyelwa ukuvumela amaxesha okukhawulezisa ukutshintsha kokuncamathiselwa kwesiko. Zonke izixhumanisi zethu ze-cast ziye zahlutha intloko kunye neerivet ziphelisa ukukhuselwa kwicala lokunxiba kwii-rivets. Oku kusivumela ukuba siphalaze amakhonkco kunye namacandelo omnqamlezo onzima ukongeza kumandla onke kumatyathanga kunye nokwenza iindawo ezinkulu zokuhambisa imithwalo kwindawo enkulu yokunciphisa ukunxiba kwimivalo esecaleni.